Banner News – Page 41 – On Khabar
ज्यान जोगाउन चोरसँग यौन सम्पर्क गरिन् केवलीले, तर पनि जोगिएन ज्यान
November 17, 2018 onkhabarComment(0)
सल्यान, २ मंसिर । सल्यानको सिमखर्कमा गत असोज २५ गते आफ्नै घरको कोठामा मृत फेला परेकी केवली नेपालीलाइ सोहि ठाउँ निवासि राजु भनेर चिनीने वीर बहादुर वस्नेतले हत्या गरेको खुल्न आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले विहिबार पत्रकार सम्मेलन र प्रेश विज्ञप्ती मार्फत यस्तो जानकारि गराएको हो । असोज २२ गते भारत बाट भखरै […]
अफिसमा आउ भन्दै बलात्कार गर्दै, पैसाको चलखेलमा मिलाउन खोज्दै प्रहरी ?
November 16, 2018 onkhabarComment(0)
काठमाडौं , ३० कात्तिक । जागिरको खोजीमा रहेकी संखुवासभाकी एक ३५ वर्षीया महिला (सुनिता) नाम परिवर्तनलाई सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर घर भइ ललितपुरको भैंसीपाटी बस्ने रेशम बहादुर पाख्रिनले विभिन्न धम्की दिदै बलात्कार गरेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको छ । तर, न्याय पाइएला भनेर प्रहरीकहाँ पुगेकी सुनितालाई भने निराशा भन्दा अरु केहि हात लाग्न सकेको छैन् । चिया पसलमा […]
इटहरी , ३० कात्तिक । आफु सानो छँदा पुस्तकमा पढेको श्रीमान गम्भिर नेपाली….ले मनमा गहिरो छाप छोडेको र राजाप्रति आदरभाव बढेका कारण ईटहरीका बाबुराम प्रधानको मनमा राजारानी प्रति उच्च सम्मान कायमै रहयो । पछि आफु होटलमा काम गर्दा सुनसरीको ईटहरी चौकमा राजा बिरेन्द्रको शालिक राखिँदा सायद उनीजति खुसी कोही भएन । पछि २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा […]
काठमाडौं , ३० कात्तिक । सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे । जसमध्ये एक थियो, इजरालयका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाउने र रिक्त भएको पदमा काठमाडौंकी अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गर्ने । पूर्वमन्त्री र राप्रपाका नेता समेत रहेका थापालाई […]
मकवानपुर, ३० कात्तिक । भाद्र २४ गते आइतबारबाट अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले कमाएको अकुत सम्पत्ति पत्नी रीता बस्नेत क्षेत्री, छोरा अभिषेक र आभुषण तथा स्वयम् उनको नाममा देखिएको हो । मकवानपुर नगरपालिका वडा नम्बर–४ हेटौडास्थित क्षेत्रीले करोडौंको जग्गा जमिन जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले […]
काडमाडौं , ३० कात्तिक । स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले अझै दुई महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।काठमाडौं। लामो समयदेखि पालो कुरेर बसेका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स लिन अझै दुई महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । विभागसँग भएका प्रिन्टिङ मेसिनमा भएको खराबी तथा एउटै नम्बरका ६ हजार लाइसेन्स दोहोरिएका कारण पालो कुरेर बसेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन अझै दुई महिना […]
November 15, 2018 onkhabarComment(0)
काडमाडौं , ३० कात्तिक । तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ? अनि आमाबुवाको लालानपालनको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैन? अब भने कानुनले नै तपार्इलाई जिम्मेवार बनाउँदै छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको तयारी सरकारले गरिरहेकाे छ। कानुनमा मासिक रुपमा आमाबुवाको बैंक खातामा रकम […]
विप्लवनिकट अखिल (क्रान्तिकारि) का ३ विद्यार्थी नेता नवलपरासीबाट गिरफ्तार
नेकपा उपत्यका इन्चार्ज विश्वकर्मासहित दुइ जना गिरफ्तार